N'ikpeazụ, Mmetụta site na isiokwu | Martech Zone
Taa mBlast weputara ohuru, uzo eji azughi ihe mPACT. Emere mPACT site na ala iji nyere ndị ọrụ aka ịchọta olu ndị nwere mmetụta na-emetụta ahịa ha site na ihe ha na-ekwu na blọọgụ, isiokwu dị n'ịntanetị, Twitter, Facebook na ntanetị ndị ọzọ n'ịntanetị.
Na mBLAST, anyị kwenyere na naanị ụzọ iji tụọ mmetụta nke olu bụ site na ilele isiokwu na isiokwu ndị olu na-ede. Imirikiti ngwá ọrụ na-achọpụta Influencer na ahịa na-eleghara ihe a anya kpamkpam, ma na-ekenye ndị mmadụ akara ọnụọgụ na-enweghị echiche ọ bụla n'ihe ha na-ekwu maka ya ma ọ bụ etu ha si emetụta isiokwu ndị ahịa ahụ na-eche. Ọ bụ naanị site n'ịchọta olu dị egwu na-ede n'ezie na isiokwu metụtara ndị na-ege anyị ntị na anyị nwere ike ịmalite iji olu ndị a nwere mmetụta iji nyere aka mezuo ebumnuche ahịa anyị. Gary Lee, Onye isi
Enweghị m ike ikwenye na Gary! Ikike na nka nwere usoro nhazi nke na-adịghị amalite na onye ahụ, kama site na isiokwu ahụ. Ọtụtụ sistemu nke oge a na-atụle mmetụta na ọkwa onwe onye karịa ọkwa dị elu - na-eme ka ọ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume ịkọwa ezi ndị ọchịchị. mBlast gosipụtara n'ezie abanyela na nnukwu algorithm nke kwesịrị ịba uru maka ndị na-ere ahịa ịche ndị isi ụlọ ọrụ aka.
Iji usoro dị ka mPACT Pro, ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa nwere ike ịchọpụta ndị ga-emetụta ya ma gakwuru ha maka ohere ezubere iche maka ndị na-ege ha ntị. Dịka ọmụmaatụ, enwere m ike ịkwalite otu ihe omume - naanị tinye isiokwu n'ime usoro ahụ wee mepụta ndepụta nke ndị edemede, ndị na-ede blọgụ, na ndị na-ahụ maka mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya. chọrọ dee banyere ihe omume dị otú ahụ!
Anyị ga-agagharị na usoro mBlast ọzọ!
Mee 4, 2011 na 12: 56 PM
Nke a bụ nnukwu echiche. Ihe ị ga-achọpụta ga-amasị m. Ọ dị ka ị na-eguzo n'azụ mbido echiche a. Kedu ka ị si kwụrụ na Klout ugbu a ọ dịla nso nwa oge? Na-amasị ya ma ọ bụ na-akpọ ya asị?
Mee 4, 2011 na 3: 10 PM
Anọ m na-enwe ekele mgbe niile na ntụziaka nke Klout na-ewere ụlọ ọrụ ahụ mana ọ na-ewute m na enweghi ọnọdụ ọ bụla na ọkwa. N'ihi nke a, ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ ndị Klout rụpụtara m na-eweta 'uzu'. Otu n'ime ha bụ ihe ngosi telivishọn - ha zigara m jaket na njikọ njikọta iji hụchalụ ihe nkiri ahụ. Nsogbu bụ… Anaghị m ekiri TV na mpụga nke akwụkwọ akụkọ na akụkọ. Yabụ - mmetụta nwere ike ịnọ ebe ahụ, mana ọ bụghị ihe dị mkpa. mBlast yiri ka ọ na-agbanwe usoro - nke m hụrụ n'anya n'ezie.